ကိုယ့် ကွန်ပျူတာမှာ Memory Stick လာထိုးလို့မရအောင် ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲ?
10 Mar 2018 . 5:18 PM
မိမိအသုံးပြုနေတဲ့ ကွန်ပျူတာမှာ Virus တွေဝင်ရောက်မှုဟာ အဓိက Memory Stick တွေကတစ်ဆင့်ပဲ ဝင်ရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကို တားဆီးဖို့ဆိုတာကလည်း အလုပ်ခွင်လိုနေရာမျိုးမှာဆိုရင် လူတိုင်းက ကိုယ့်ကွန်ပျူတာကို ဘယ်အချိန်မှာ Memory Stick ထိုးပြီး အသုံးပြုသွားတာကို မသိနိုင်သလို အချိန်တိုင်းလည်းစောင့်ကြည့်နေဖို့ မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် တကယ်လို့ မတော်တဆ Virus ဝင်ရောက်သွားခဲ့ရင် အချိန်တစ်ခုပြန်ေပးပြီး ဖြေရှင်းနေရတော့မှာပါ။
အခုလိုမျိုးမဖြစ်ရအောင် သင့်ကွန်ပျူတာမှာ ရှိတဲ့ USB Port တွေကို အသုံးပြုလို့မရတော့အောင် ပိတ်ထားနိုင်တယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား? အဲ့ဒီလို Memory Stick တွေထိုးလို့မရအောင် ပိတ်ထားလို့ရတဲ့ နည်းလမ်း ၃ မျိုးကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
#1 Registry ကနေတစ်ဆင့် ပိတ်ခြင်း
Windows အသုံးပြုထားတဲ့ ကွန်ပျူတာတွေမှာ Registry ကနေ ပိတ်တာကတော့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုလို့ ပြောလို့ရပြီး စိတ်အချရဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လို ပိတ်ရမလဲဆိုတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အရင်ဆုံး Windows Key + R ကို နှိပ်ပြီး Run Box ကို ခေါ်လိုက်ပါ၊ ပြီးရင် “regedit” လို့ ရိုက်ပြီး Registry Editor ကို ခေါ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် ပေါ်လာတဲ့ Window ရဲ့ ညာဘက်မှာရှိတဲ့ HIKEY_LOCAL_MACHINE ကို ဖြေချပြီး SYSTEM -> CURRENT CONTROL SET -> SERVICE -> USBSTOR ကို ရောက်အောင်သွားပါ။
USBSTOR ကို နှိပ်လိုက်ရင် Window ရဲ့ ညာဘက်ခြမ်းမှာ စာကြောင်း ၈ ကြောင်းလောက်ကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပြီး အဆိုပါ စာကြောင်းတွေထဲက Start ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်ပေါ်လာတဲ့ Window တစ်ခုမှာ Value Data ဆိုတဲ့ အကွက်ရှိမှာဖြစ်ပြီး အထဲက ကိန်းဂဏန်းကို “3” အစား “4” ကို ပြောင်းပြီး “OK” နှိပ်ပြီး ထွက်လိုက်ပါ။
အဲ့ဒါဆိုရင် USB Ports တွေကနေ တစ်ဆင့် Memory Stick တွေကို အသုံးပြု၍ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်လို့ ပြန်ပြီး အသုံးပြုလို့ရအောင် ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ အခုနနေရာက USBSTOR ရဲ့ Value Data ကို “3” ပြန်လည် ပြောင်းထားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
#2 Device Manager ကနေ USB Ports တွေကို Disable ပြုလုပ်ခြင်း
နောက်ထပ်တစ်နည်းကတော့ Device Manager ကို အသုံးပြုပြီး Disable ပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီး ပထမနည်းနဲ့ယှဉ်ရင် လုပ်ရမယ့်အချက်ပိုပြီး များမှာဖြစ်ပါတယ်။
အရင်ဆုံး Device Manager ကို My Computer ကို Right Click ထောက်ပြီး Manage ကနေ Device Manager ကို ရွေးချယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Windows Key + R ကို နှိပ်ပြီး Run Box ကနေ “devmgmt” လို့ Command ရုိုက်ခေါ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Windows 8/8.1 နဲ့ 10 ကို အသုံးပြုနေတဲ့သူတွေဆိုရင် Task Bar က Windows Logo ကို Right Click ထောက်ပြီး Device Manager ကို ရွေးချယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြုလုပ်ပြီး ဝင်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Device Manager ထဲရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ အောက်ဆုံးနားမှာရှိတဲ့ Universal Serial Bus Controller ကို ဖြန့်ချပြီး အဲ့ဒီ List ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ USB Device Driver တစ်ခုချင်းစီကို Right Click ထောက်ပြီး Disable ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြုလုပ်ပြီးရင်တော့ Memory Stick နဲ့ အရင်စမ်းကြည့်ပြီး တကယ်လို့ အသုံးပြု၍ရနေသေးတယ်ဆိုရင် ကွန်ပျူတာကို Restart ချကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အခုနည်းနဲ့ ပိတ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ ပြန်လည်အသုံးပြုချင်ရင် အခုက Disable ပြုလုပ်ထားတဲ့ Driver တွေကို ပြန်ပြီး Enable ပြုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
#3 Device Manager ကနေ USB Driver တွေကို Uninstall ပြုလုပ်ခြင်း
အခုနည်းကတော့ နောက်ဆုံးမှပြုလုပ်ဖို့ အကြံပြုချင်ပြီး အခုနကနည်းလမ်းလိုပဲ Device Manager ကနေတစ်ဆင့်ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပြီး မတူညီတာက Disable ပြုလုပ်တာမဟုတ်တော့ပဲ အပြီးတိုင် Uninstall ပြုလုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အခုနည်းလမ်းနဲ့ ပိတ်လိုက်တာက ပြန်လည်အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင် USB Driver တွေကို ပြန်လည်သွင်းရဖို့အထိတစ်ခါတလေ လိုအပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် နောက်ဆုံး မဖြစ်မနေပြုလုပ်ဖို့ လိုအပ်မှသာ ပြုလုပ်ဖို့ အကြုံပြုလိုက်ပါတယ်။
အခုလို Memory Stick တွေကို အသုံးပြု၍မရအောင် ပိတ်ထားတာက Virus ဝင်ရောက်မှုကို အနည်းနဲ့ အများကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် လုံးဝစိတ်ချရဖို့အတွက်ကတော့ Anti Virus Software တစ်ခုခု အသုံးပြုပြီး အမြဲတမ်း Update ပြုလုပ်ထားတာကတော့ စိတ်အချရဆုံးဖြစ်မှာပါ။
မိမိအသုံးပွုနတေဲ့ ကှနျပြူတာမှာ Virus တှဝေငျရောကျမှုဟာ အဓိက Memory Stick တှကေတဈဆငျ့ပဲ ဝငျရောကျကွတာဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒါကို တားဆီးဖို့ဆိုတာကလညျး အလုပျခှငျလိုနရောမြိုးမှာဆိုရငျ လူတိုငျးက ကိုယျ့ကှနျပြူတာကို ဘယျအခြိနျမှာ Memory Stick ထိုးပွီး အသုံးပွုသှားတာကို မသိနိုငျသလို အခြိနျတိုငျးလညျးစောငျ့ကွညျ့နဖေို့ မဖွဈနိုငျတဲ့အတှကျ တကယျလို့ မတျောတဆ Virus ဝငျရောကျသှားခဲ့ရငျ အခြိနျတဈခုပွနျေပးပွီး ဖွရှေငျးနရေတော့မှာပါ။
အခုလိုမြိုးမဖွဈရအောငျ သငျ့ကှနျပြူတာမှာ ရှိတဲ့ USB Port တှကေို အသုံးပွုလို့မရတော့အောငျ ပိတျထားနိုငျတယျဆိုတာ သငျသိပါသလား? အဲ့ဒီလို Memory Stick တှထေိုးလို့မရအောငျ ပိတျထားလို့ရတဲ့ နညျးလမျး ၃ မြိုးကို ပွောပွပေးခငျြပါတယျ။
#1 Registry ကနတေဈဆငျ့ ပိတျခွငျး
Windows အသုံးပွုထားတဲ့ ကှနျပြူတာတှမှော Registry ကနေ ပိတျတာကတော့ အကောငျးဆုံးနညျးလမျးတဈခုလို့ ပွောလို့ရပွီး စိတျအခရြဆုံးနညျးလမျးတဈခုလညျးဖွဈပါတယျ။ ဘယျလို ပိတျရမလဲဆိုတဲ့ နညျးလမျးတှကေို ပွောပွပေးသှားမှာဖွဈပါတယျ။
အရငျဆုံး Windows Key + R ကို နှိပျပွီး Run Box ကို ချေါလိုကျပါ၊ ပွီးရငျ “regedit” လို့ ရိုကျပွီး Registry Editor ကို ချေါလိုကျပါ။
ပွီးရငျ ပျေါလာတဲ့ Window ရဲ့ ညာဘကျမှာရှိတဲ့ HIKEY_LOCAL_MACHINE ကို ဖွခေပြွီး SYSTEM -> CURRENT CONTROL SET -> SERVICE -> USBSTOR ကို ရောကျအောငျသှားပါ။
USBSTOR ကို နှိပျလိုကျရငျ Window ရဲ့ ညာဘကျခွမျးမှာ စာကွောငျး ၈ ကွောငျးလောကျကိုတှမွေ့ငျရမှာဖွဈပွီး အဆိုပါ စာကွောငျးတှထေဲက Start ဆိုတာကို နှိပျလိုကျရမှာဖွဈပါတယျ။ နောကျထပျပျေါလာတဲ့ Window တဈခုမှာ Value Data ဆိုတဲ့ အကှကျရှိမှာဖွဈပွီး အထဲက ကိနျးဂဏနျးကို “3” အစား “4” ကို ပွောငျးပွီး “OK” နှိပျပွီး ထှကျလိုကျပါ။
အဲ့ဒါဆိုရငျ USB Ports တှကေနေ တဈဆငျ့ Memory Stick တှကေို အသုံးပွု၍ရတော့မှာမဟုတျပါဘူး။ တကယျလို့ ပွနျပွီး အသုံးပွုလို့ရအောငျ ပွုလုပျမယျဆိုရငျတော့ အခုနနရောက USBSTOR ရဲ့ Value Data ကို “3” ပွနျလညျ ပွောငျးထားရမှာပဲဖွဈပါတယျ။
#2 Device Manager ကနေ USB Ports တှကေို Disable ပွုလုပျခွငျး
နောကျထပျတဈနညျးကတော့ Device Manager ကို အသုံးပွုပွီး Disable ပွုလုပျတာဖွဈပွီး ပထမနညျးနဲ့ယှဉျရငျ လုပျရမယျ့အခကျြပိုပွီး မြားမှာဖွဈပါတယျ။
အရငျဆုံး Device Manager ကို My Computer ကို Right Click ထောကျပွီး Manage ကနေ Device Manager ကို ရှေးခယျြတာပဲဖွဈဖွဈ၊ Windows Key + R ကို နှိပျပွီး Run Box ကနေ “devmgmt” လို့ Command ရိုကျချေါတာပဲဖွဈဖွဈ၊ Windows 8/8.1 နဲ့ 10 ကို အသုံးပွုနတေဲ့သူတှဆေိုရငျ Task Bar က Windows Logo ကို Right Click ထောကျပွီး Device Manager ကို ရှေးခယျြတာပဲဖွဈဖွဈ ပွုလုပျပွီး ဝငျရောကျနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
Device Manager ထဲရောကျသှားပွီဆိုရငျတော့ အောကျဆုံးနားမှာရှိတဲ့ Universal Serial Bus Controller ကို ဖွနျ့ခပြွီး အဲ့ဒီ List ထဲမှာ ပါဝငျတဲ့ USB Device Driver တဈခုခငျြးစီကို Right Click ထောကျပွီး Disable ပွုလုပျရမှာဖွဈပါတယျ။
ပွုလုပျပွီးရငျတော့ Memory Stick နဲ့ အရငျစမျးကွညျ့ပွီး တကယျလို့ အသုံးပွု၍ရနသေေးတယျဆိုရငျ ကှနျပြူတာကို Restart ခကြွညျ့ရမှာဖွဈပါတယျ။
အခုနညျးနဲ့ ပိတျထားတယျဆိုရငျတော့ ပွနျလညျအသုံးပွုခငျြရငျ အခုက Disable ပွုလုပျထားတဲ့ Driver တှကေို ပွနျပွီး Enable ပွုလုပျပေးရမှာဖွဈပါတယျ။
#3 Device Manager ကနေ USB Driver တှကေို Uninstall ပွုလုပျခွငျး
အခုနညျးကတော့ နောကျဆုံးမှပွုလုပျဖို့ အကွံပွုခငျြပွီး အခုနကနညျးလမျးလိုပဲ Device Manager ကနတေဈဆငျ့ပွုလုပျရမှာဖွဈပွီး မတူညီတာက Disable ပွုလုပျတာမဟုတျတော့ပဲ အပွီးတိုငျ Uninstall ပွုလုပျလိုကျတာဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ အခုနညျးလမျးနဲ့ ပိတျလိုကျတာက ပွနျလညျအသုံးပွုခငျြတယျဆိုရငျ USB Driver တှကေို ပွနျလညျသှငျးရဖို့အထိတဈခါတလေ လိုအပျမှာဖွဈတဲ့အတှကျ နောကျဆုံး မဖွဈမနပွေုလုပျဖို့ လိုအပျမှသာ ပွုလုပျဖို့ အကွုံပွုလိုကျပါတယျ။
အခုလို Memory Stick တှကေို အသုံးပွု၍မရအောငျ ပိတျထားတာက Virus ဝငျရောကျမှုကို အနညျးနဲ့ အမြားကာကှယျပေးနိုငျတယျဆိုပမေယျ့ လုံးဝစိတျခရြဖို့အတှကျကတော့ Anti Virus Software တဈခုခု အသုံးပွုပွီး အမွဲတမျး Update ပွုလုပျထားတာကတော့ စိတျအခရြဆုံးဖွဈမှာပါ။